जाजरकोटको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एमाले विजयी
जाजरकोट, २ जेठ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष एमाले – नरेन्द्रकुमार शाही– २,०१७ (विजयी) नेका– खडक बिसी – १,८३३ उपाध्यक्ष – कुमारी थापा – २,०६३ (विजयी) गीता शाही – १,८१२ जाजरकोट, जुनीचाँदे गापा–११ अन्तिम नतिजा जुनीचाँदे गाउँपालिका–११ वडाध्यक्ष– एमाले– अमर शाही– ३०७ (विजयी) माओवादीकेन्द्र– भीमबहादुर बस्नेत– २३९ नेका– धर्म नेपाली– ..
जाजरकोटको जुनीचाँदे गापा–११ मा एमाले विजयी
जाजरकोट, जेठ २ – जुनीचाँदे गाउँपालिका–११ वडाध्यक्ष एमाले– अमर शाही– ३०७ (विजयी) ..
स्याङजाका ११ स्थानीय तहको यस्तो छ पछिल्लो नतिजा
स्याङ्जा, २ जेठ– स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्याङ्जामा मतगणना जारी छ । ११ स्थानीय ..
म्याग्दीको अन्नपूर्ण–४ मा काँग्रेस विजयी
म्याग्दी, २ जेठ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४– वडाध्यक्ष–दल– उम्मेदवार– मत नेका– चन्द..
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयी
दैलेख, जेठ २ –दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको ..
UPDATE : पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा एमाले फराकिलो अन्तरले अगाडि
मेयरका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका रामजी कुँवर — २६२७ मत एमालेका मानबहादुर जिसी — ३२५६ मत उपमेयरका उम्मेदवार: नेपाली कांग्रेसका सरस्वती गुरुङ — १७३९ मत एमालेका मञ्जुदेवी गुरुङ — १७९५ मत
धादिङमा एमाले १२, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र चार–चार स्थानमा विजयी
धादिङ, २ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचको मतगणना कार्य सुरु भएपछि हालसम्म २० वटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त परिणामअनुसार एमालेले २० वटा वडा, नेपाली काँग्रेसले चार वटा वडा र नेकपा माओवादी केन्द्रले चार वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ । धुनीबेसी नगरपालिका–१ मा चन्द्र लामा, २ मा बलराम कुँवर, थाक्रे गाउँपालिका–२ […]
चौरी देउरालीको दुई वडामा माओवादी केन्द्र विजयी
धुलिखेल, २ जेठ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको कोसीपारि चौरी देउरालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै वडामा विजयी भएको छ । सो गाउँपालिकाको वडा नं १ मा राजु आले तामाङ र वडा नं २ मा दिनेश लामा विजयी भएका छन्। तामाङले ३१० मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका प्रताव लामाले २७७ मत प्राप्त गरेका थिए […]
काठमाडौंको पछिल्लो परिणामः एमाले अगाडी, साझा दोस्रो स्थानमा रहँदा माओवादी पाँचौं
काठमाडौ, जेठ २– काठमाडौ महानगरपालिकाको मतगणना दुई स्थानबाट सुरु भएको छ । वडा नम्बर १ र ३२ बाट भएको मत गणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले २७२ मत ल्याएर अग्रपक्ति कायमै राखेका छन् । त्यस्तै कांग्रेसका राजुराज जोशीले १९२ मत ल्याएका छन् । उनी साझा पार्टीका किशोर थापा भन्दा पछाडि छन् । साझा पार्टीले [&h..
मुस्ताङको तीन गाउँपालिकामा प्रमुख चुनिए : को–को भए विजयी ?
मुस्ताङ, २ जेठ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङको तीन गाउँपालिकामा मतगणना सम्पन्न भएको छ । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका सुवर्णकुमार विष्ट विजयी भएका छन् । सोमबार राति सम्पन्न मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्टलाई पराजित गर्नुभएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधि..
वाग्मती गाउँपालिका–३ मा माओवादी केन्द्रको समूह नै विजयी
हेटौँडा, २ जेठ । मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिका–३ मा माओवादी केन्द्रको समूह नै विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षका उम्मेवार बलबहादुर पाख्रिनले ३१४ मत प्राप्त गरी विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का बाबुलाल गोलेले २५५ मत प्राप्त गरेका छन् । यस वडाबाट अध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ३१२, नेकपा एम..
स्याङ्जाका तीनमध्ये दुई नगरपालिकामा कांग्रेस अगाडि
स्याङजा, जेठ २ – स्याङजाका विभिन्न स्थानीय तहको मत गणना जारी छ । जिल्लाका तीन नगरपालिकामा अहिलेसम्म गणना भएको पछिल्लो नतिजा यस्तो छ । १.पुतलिबजार नगरपालिका उम्मेदवार (मेयर) सिमा क्षेत्री एमाले १२९४ तुलसी रेग्मी कांग्रेस १०९८ उपमेयर उम्मेदवार (उपमेयर) महेश पुरी एमाले १३५८ हिरा शर्मा कांग्रेस १०९१ २.भिरकोट नगरपालिका उम्मेदवार (मेय..
मुस्ताङ, जेठ २ – हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार आसबहादुर थकाली ४५४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका विजयी हिराचनले ४१७, स्वतन्त्र उम्मेदवार महेन्द्र थकालीले २३६ र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश थकालीले ५५ मत मत ल्याएको जिल्ला नि..
बेनी–२ मा एमाले विजयी
म्याग्दी, २ जेठ । बेनी नगरपालिका–२ मा ज्यामरुक कोटमा नेकपा एमाले– राप्रपा समूहबाट छ र नेपाली काँग्रेसबाट एक जना उम्मेदवार विजयी भएका छन्। एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार हिराबहादुर थापा ६३४ मत प्राप्त गरी विजयी भ। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका प्रताप मल्लले ५९६ मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार राति ११ बजेदेखि सुरु गरिएको मतगण..
सिन्धुपाल्चोकः कहाँ कसको वडाध्यक्ष ? (सुचिसहित)
सिन्धुपाल्चोक, जेठ २ – सिन्धुपाल्चोकको २६ वटा वडाको मतगणना सकिँदा एमालेले ११, कांग्रेसले आठ, माओवादी केन्द्रले ६ र राप्रपाले एउटा वडा जितेका छन् । बाँकी परिणाम आउने क्रम जारी छ । १, मेलम्ची नपा–१, एमाले २, बलेफी गापा–१, एमाले ३, बाह्रविसे नपा–१, कांग्रेस ४, हेलम्बु गापा–१, कांग्रेस ५, मेलम्ची नपा–२, एमाले ६, चौतारा नपा–३, एमाले ..
धौलागिरि–१ मा माओवादी केन्द्र र २ मा एमाले विजयी
म्याग्दी, जेठ २- म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाका दुई वटा वडाको मतगणना सकिएको छ । धौलागिरि १ गुर्जामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार झकबहादुर छन्त्यालले २५४ मत प्राप्त गरेर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका समबहादुर छन्त्यालले १५९ मत ल्याउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रकी सीताकुमारी छन्त्यालले महि..
जाजरकोटकाे कुशे गाउँपालिकामा काँग्रेस विजयी
जाजरकोट, २ जेठ – कुशे गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका अध्यक्षका उम्मेदवार हरिचन्द्र बस्नेत दुई हजार ५०८ र उपाध्यक्षमा रामछाया शाही दुई हजार ३७८ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ । उहाँहरुका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा(एमाले)का तत्तबहादुर हमालले दुई हजार ४४ र उपाध्यक्षका गङ्गा आरसीले एक हजार ९८८ मत ल्याउनुभएको छ । त्यस्तै नेकपा (मा..
भक्तपुर, जेठ २- स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत विवादित चाँगुनारायण नगरपालिकामा बुधबार पुनः मतदान हुने भएको छ । चाँगुनारायण– ६ स्थित वडा कार्यालय अर्थात् साबिक नगरकोट गाविस भवनको मतदान केन्द्रमा भने निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने भएको हो । आइतबार मतदानका क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिह्न ‘मादल’ नभएको मतपत्र वितरण..
नवलपरासीको बुङ्दीकाली गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी
नवलपरासी, २ जेठ । नवलपरासीको बुङ्दीकाली गाउँपालिकको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका दुर्गाबहादुर रानाले तीन हजार १९१ मत ल्याई विजयी भएका छन्। उपप्रमुखमा पनि काँग्रेसकै मायादेवी श्रेष्ठले तीन हजार १७३ मत ल्याई विजयी बनेकी छिन् । अध्यक्षमा रानाले एमालेका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई १५२ मतले पराजित गरेका हुन् । श्रेष्ठल..
४ ओटै महानगरमा एमाले अगाडि (ताजा मतपरिणामसहित)
काठमाडौं, जेठ २– ताजा मतपरिणामअनुसार ४ ओटै महानगरपालिकामा एमालेले अग्रता कायम गरेको छ । भरतपुर मेयरका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका रेणु दाहाल — 595 मत एमालेका देवी ज्ञवाली — 761 मत उपमेयरका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका पार्वती शाह —604 मत एमाले दिव्य आचार्य — 599 मत पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका नेपाली कांग्रेसका रामजी कुँवर — ..
UPDATE : भरतपुर महानगरमा देवीको अग्रता कायमै, रेणु पछिपछि
भरतपुर महानगरमा सोमबार साढे चारबजेबाट मतगणना शुरु भएको हो । मेयरका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका रेणु दाहाल — 595 मत एमालेका देवी ज्ञवाली — 761 मत उपमेयरका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका पार्वती शाह —604 मत एमाले दिव्य आचार्य — 599 मत
बनेपा नपाको वडा नम्बर ३ र ४ मा एमाले विजयी, १ र २ मा नेपाली काँग्रेस
काभ्रे, २ जेठ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमालेको अग्रता रहेको छ । बनेपा नगरपालिकाको मतगणना अनुसार वडा नम्बर ३ र ४ मा एमाले विजयी छ । त्यस्तै, मण्डन देउपुर वडा नम्बर १ को मतगणना अनुसार एमाले पूरै समूह विजयी भएको छ । त्यस्तै, पाँचखालको वडा नम्बर १ मा पनि एमालेको अग्रता देखिएको […]
दुईसय ६० भन्दाबढी स्थानीय तहमा मतगणना जारी
काठमाडौँ, २ जेठ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको वैशाख ३१ भएको निर्वाचनका मतपेटिका संकलन गर्ने कार्य पूरा भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, मतपेटिका सङ्कलन भएपनि मुलुकका सात वटा मतदान केन्द्रमा मतगणना सुरु हुन बाँकी नै रहेको छ । छ स्थानमा विभिन्न कारणले मतगणना र मतदान नै रोकिएको छ । काभ्रे र दोलखाको एक तथा […]
भक्तपुरमा नेमकिपाले खाता खोल्यो, वडा नं १ मा प्यानलनै विजयी
भक्तपुर, २ जेठ । भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खाता खोलेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नं १ को आज बिहान सम्पन्न मतगणनामा नेमकिपाका श्यामकृष्ण खत्रीको प्यानलनै विजयी भई खाता खोलेको हो । खत्रीले एक हजार ३७६ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका पवन भुजुले ५०४ मत ल्याएका थिए [&hell..
UPDATE : गाँउपालिका र नगरपालिका प्रमुखमा कहाँ-कहाँबाट कसले जिते ?
जेठ २, काठमाडौँ-पहिलो चरणको स्थानीय तहको वैशाख ३१ भएको निर्वाचनका मतपेटिका संकलन गर्ने कार्य पूरा भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, मतपेटिका सङ्कलन भएपनि मुलुकका सात वटा मतदान केन्द्रमा मतगणना सुरु हुन बाँकी नै रहेको छ । छ स्थानमा विभिन्न कारणले मतगणना र मतदान नै रोकिएको छ । काभ्रे र दोलखाको एक तथा कालीकोटको दुई स्थानमा [&helli..